Mozilla Firefox ရဲ့ Web Browser | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » Mozilla Firefox ရဲ့ Web Browser
Mozilla Firefox ရဲ့ Web Browser APK ကို
တစ်ဦး, အစာရှောင်ခြင်းစမတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Web ကိုခံစားရသည်။ Firefox ကို Mozilla ကဖြင့်လွတ်လပ်သော, လူတွေ-ပထမဦးဆုံးဘရောက်ဇာသည်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အများစုကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အင်တာနက်ကိုကုမ္ပဏီမဲပေးကြသည်။ ယနေ့ upgrade နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး browsing အတွက်အတွေ့အကြုံအတွက် Firefox ကိုအပေါ်မူတည်တဲ့သူသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာ join ။
Fast ။ SMART ။ သင့်ရဲ့။
Firefox ကိုစိတျထဲတှငျသငျနှငျ့အတူ လုပ်. သင်သည်သင်၏ Web ကိုအတှေ့အကွုံထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်ယူပါဝါပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ browsing အတွက်ထဲက guesswork ယူစမတ် features တွေနှင့်အတူထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းဒါကြောင့်ပါပဲ။
SEARCH Intelligence & ပို. မြန်ဆန်စွာရောက်ရှိ GET
- Firefox ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မျှော်မှန်းခြင်းနှင့်အလိုလိုမျိုးစုံအကြံပြုနှင့်ယခင်ကသင်အကြိုက်ဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုဖြတ်ပြီးရလဒ်များကိုကိုရှာဖွေပေးပါသည်။ အချိန်တိုင်း။
- အလွယ်တကူဝီကီပီးဒီးယား, Twitter နဲ့အမေဇုံအပါအဝင်ပံ့ပိုးပေးရှာဖွေ shortcuts တွေကို access ။
- သင်၏ privacy ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ browsing အတွက်လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံစေခြင်းငှါက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုခြေရာကောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ကွက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပုဂ္ဂလိက Browsing ။
သင့်ကိရိယာများ SYNC FIREFOX
- တစ်ဦး Firefox ကိုအကောင့်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှာသင်၏ desktop ကနေသင့်ရဲ့သမိုင်း, စာညှပ်များနှင့်ပွင့်လင်း tabs များရယူသုံးပါ။
- သင်စရာမလိုပါဒီတော့ Firefox ကိုလည်းလုံလုံခြုံခြုံ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုအောက်မေ့၏။
Intuition Visual TABS
- အလိုလိုအမြင်အာရုံနှင့်နံပါတ် tabs များအလွယ်တကူသင်သည်အနာဂတ်ကိုးကားအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေကြကုန်အံ့။
- သင်သည်သင်၏ပွင့်လင်း web page များကိုခြေရာခံဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲကြိုက်နှစ်သက်သကဲ့သို့အများအပြား tabs များဖွင့်ပါ။
- ကြော်ငြာ blockers, password နဲ့ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာနှင့်ပိုပြီးတူသော Add-ons တွေကိုနှင့်အတူ Firefox ကိုကိုစိတ်တိုင်းကျအားဖြင့်သင့် Web ကိုအတှေ့အကွုံထိန်းချုပ်မှုကိုယူပါ။
- Firefox ကိုသင်အလွယ်တကူ Facebook, Twitter WhatsApp ကို, Skype နဲ့ပိုပြီးမှအကြောင်းအရာများဝေမျှကူညီပေးရန်ရန်သင့်အများဆုံးမကြာသေးမီကအသုံးပြုသော apps များအောက်မေ့။
- ထောက်ခံ streaming များစွမ်းရည်တပ်ဆင်ထားမဆိုတီဗီရန်သင့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှဗီဒီယိုနဲ့ Web content တွေကိုပေးပို့ပါ။
Android အတွက် Firefox ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
- မေးခွန်းများကိုဖူးသို့မဟုတ်အကူအညီလိုအပ်? https://support.mozilla.org/mobile သွားရောက်ကြည့်ရှု
- Firefox ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖတ်ရန်: http://mzl.la/Permissions
- Mozilla ကမှာတက်မယ့်အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ: https://blog.mozilla.org
mzl.la/FXFacebook: - Facebook ပေါ်မှာ Firefox ကိုလိုပဲ
- Twitter ပေါ်တွင် Firefox ကိုလိုက်နာပါ: http://mzl.la/FXTwitter
Mozilla ကကျနော်တို့ပွင့်လင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်တံခါးပိတ်ထက်ပိုကောင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားယုံကြည်သောကြောင့်, လူအပေါင်းတို့အားလက်လှမ်းအများပြည်သူအရင်းအမြစ်အဖြစ်အင်တာနက်ကိုတည်ဆောက်ရန်တည်ရှိ။ ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုနှင့်လင်းမြင်သာမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အွန်လိုင်းလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်ပေးရ Firefox ကဲ့သို့ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်စေ။ mozilla.org မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
သည် HTTP တိုက်ရိုက်လွှအပေါ် * တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို (HLS ဖွ) မီဒီယာပြန်ဖွင့်
အစာရှောင်ခြင်း & ပုဂ္ဂလိက Firefox ကို Browser ကို
37.27 ကို MB
Tor Browser ကို (Alpha)
ပုဂ္ဂလိက Browser ကို - ...
ယောသပ်သည် Lagu says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2019 မှာ 4: 21 ညနေ
နံနက်နေဆဲ Download ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ
Anitra Bullock says:
မတ်လ 23, 2018 မှာ 4: 53 နံနက်
Cool App ကို
Noman Mithu says:
မတ်လ 14, 2017 မှာ 11: 11 နံနက်
၎င်း၏တစ်ဦးစူပါအစာရှောင်ခြင်း apk ပိုက်ကွန်ကိုအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ browsing
ကင်မ် Enyi says:
အောက်တိုဘာလ 16, 2016 မှာ 1: 38 ညနေ
တစ်ဦးအလားအလာ Downloader ကိုတစ်ဦးချင်းစီ app ကိုများအတွက်လိုအပ်သောဒေတာများကိုအာကာသကိုသိနိုင်အောင်တိုးတက်မှုများအတွက်, သင်သည်သင်၏ downloads, ၏စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
သို့တိုင်အံ့သြစရာ။ - သင့် apps များ။ ကြေးဇူးတငျစကား
အောက်တိုဘာလ 16, 2016 မှာ 1: 30 ညနေ
အံ့သြစရာ app ကို! တစ်ဦးကပြဿနာ solver ။ အရမ်းပိုမိုလွယ်ကူဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြန်နှုန်း။ သငျသညျမှ Kudos
MD ။ ရှိတ် Shady says:
စက်တင်ဘာလ 13, 2015 မှာ 6: 51 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2015 မှာ 6: 31 ညနေ
ကောင်းတဲ့ apk :)
RS HRIDOY says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2015 မှာ 10: 39 ညနေ
ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက် Love ... ..
ကိုယ်မင်းကို admin ရဲ့ခစျြ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2015 မှာ 2: 00 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 12, 2015 မှာ 3: 03 ညနေ
ကောင်းတဲ့ apk ကြောင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2014 မှာ 7: 57 ညနေ
စူပါ app ကို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2014 မှာ 9: 04 နံနက်
ဒီ app များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ 7, 2014 မှာ 10: 14 နံနက်
gr8888 app ကိုယင်း၏ဒါ cooolllll
အောက်တိုဘာလ 30, 2014 မှာ 7: 40 ညနေ
android မိုဘိုင်းအတွက်၎င်း၏အလွန်ကောင်းသော app ကိုကိုယ်ဒီ app များအတွက် 5star အကြောင်းကိုပေးနဲ့ကိုယ်ကဤ website ကိုကြိုက်တယ်
Rishav Bikarwar says:
အောက်တိုဘာလ 19, 2014 မှာ 10: 18 ညနေ
Android အတွက် Awesome ကိုနှင့်အမြန်ဆုံး browser ကို။ ငါကသိပ်သဘောကျတယ် ...
RISHABH ဆင်း says:
အောက်တိုဘာလ 14, 2014 မှာ 12: 20 ညနေ
ထိပ်တန်း app ကို။
ငါ့ကိုအလုပ်လုပ်ဘို့လွယ်ကူစေသည် ... ။